Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray Photos / Video ka HTC ugaar
> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray Photos / Video ka HTC ugaar
Sidee ayaan soo kabsado photos tirtiray ka HTC ugaar?
Hadda ayaan soo tirtiray oo dhan sawiro Wixii aan la isticmaalayo aan ugaar HTC - ay la soo kabsaday karaa?
Waa fikrad khaldan caadiga ah ka mid ah dadka in sawiro ama video tirtiray, gaar ahaan formatted ka telefoonada gacanta oo kale HTC ugaar, waxaa la joogto ah tirtirayaa. Dhab ahaantii, ma ahan runta. Sawiro u qaado sida tusaale. Marka aad ka HTC ugaar tirtirto photos, sawirada waxa kaliya ee lagu calaamadeeyay sida tirtiray kaarka SD ah, iyo dib waxaad iyaga ka heli kartaa ka hor inta aan overwritten.
Marka hore, soo bixi barnaamij soo kabashada HTC ugaar. My recomendation: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac , software lagu kalsoonaan karo oo user-friendly, oo labadaba aad awood inuu ka soo kabsado photos, video iyo maqal ah in ay la tirtiray, formatted ama laga badiyay sababo kale ka HTC Wildefire. Waxaad ku eegaan kartaa sawiro ka hor soo kabashada.
Isku day version maxkamad free of this software kabashada HTC ugaar hadda hoos ku qoran.
Sidee inuu ka soo kabsado lumay photos / video ka HTC ugaar
Qaado version Windows sida tusaale. Aan isku dayno waa talaabo talaabo wada.
Wax First hore : Ha ku qorin wax files dib si aad u HTC ugaar (ama kaarka SD ah) ka hor inta aadan ka HTC ugaar celin tirtiray photos / video .
Step1. Connect phone HTC ugaar in kombiyuutarka
Si aan ku bilaabo, xirmaan telefoonka HTC ugaar in kombiyuutarka la cable USB ah. Haddii aan la ogaan karaa oo u muuqda sida warqad drive ee "My Computer" ah, waxaad u baahan tahay kaarka akhristaha ah in ay ku xidhmaan card SD si aad u computer ah. Burcad barnaamijka oo guji si "bilow" kabashada HTC ugaar.
Step2. Dooro telefoonka HTC ugaar oo ay bilaabaan iskaanka
Markaas dooratid HTC ugaar oo guji "Scan" si aad u ogaato lumay sawiro iyo videos HTC ugaar.
Step3. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo soo celinta HTC ugaar photos / video / audio
Marka gool scan ah, mid mid aad ku eegaan kartaa sawiro tirtiray, oo hubi in ay iyaga oo dhan soo kabsadaan ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday ah ee aad taleefan HTC ugaar. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.
Video tutorial soo kabashada HTC ugaar
HTC Recovery: Ladnaansho Photos Lost, Videos iyo Music on Android
Top Video 6 yeedhay Apps u Samsung casriga
3 talooyin waa in aad ogtahay marka aad u iibsato Android Apps
Sidee si ay u gudbiyaan Apps, Xiriirada, Calendar, Music, SMS iyo More ka HTC in HTC
Sida loo soo ceshano tirtiray Messages ka HTC ugaar
Best Android App Abaabulaha Waxaad u
Sida loo uninstall Android Apps ka PC